March 2022 – Daily News
March 31, 2022 Bo Bo 0
ပြည့်ဝသောအာဟာရအတွက် ငါးစားသုံးပါ လူတိုင်းလူတိုင်း ကျားမမရွေး ကလေး၊ လူကြီး၊ ပိန်ချုံးချည့်နဲ့၍ အားအင်ကုန်ခမ်းချို့တဲ့နေလျှင် ငါးကို မီးဖုတ်၍စားသုံးပါက အင်အားများ ပြည့်ဖြိုးလာစေပါသည်။ ငါးမီးဖုတ်ကို အရေခွံတင်းနေအောင် မီးဖုတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီဥကြီးအား အကွင်းလိုက်လှီး၍ ဆီ၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ သံပုရာသီးညှစ်ပြီး နံနံပင်ဖြင့် ငါးမီးဖုတ်သုပ်စားပါက အင်အားပြည့်ဖြိုးလာစေပါသည်။ ဒူးနာရောဂါအတွက် […]
လူသိနည်းပြီး သတိမမူမိကြတဲ့ မိမိ အိမ်မှာ အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး […]
သန်း ၉၀ ထီပေါက်သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများကို လက်ဝတ်ရတနာမိုးရွာချပြီး အလှူပေးခဲ့သည့် အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး
March 31, 2022 Min Thuta 0
သန်း ၉၀ ထီပေါက်သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများကို လက်ဝတ်ရတနာမိုးရွာချပြီး အလှူပေးခဲ့သည့် အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး။ လူသားအားလုံးကို ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့စေသော စိတ်ကူးလေးဟာ အလွန်ကောင်းမွန်လှသော စိတ်ကူးလေးဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူတို့အနေဖြင့်လည်း မိမိ၏မိတ်ဆွေများအားလုံးကို အဆင်ပြေစွာဖြင့် ဘဝကို ပျော်ရွင်နေမှုအား မြင်တွေ့လိုမှာသေချာပါတယ်။ ယခုတွင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံ Udonပြည်နယ်မှ အသက်၄၈နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးဟာ ထိုင်းငွေဘတ်သန်း၉၀ထီဆုကြီးကို […]
အောင်မြင် ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်…
အောင်မြင် ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်… စာသင်ခန်း ထဲမှာထက် အပြင်ဘဝက သင့်ကို ပိုသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁ – ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အရည်အသွေး အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုဟာ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အရည်အသွေး ကို မူတည်ပါတယ်။ […]
ရန်ကုန်ကစားကွင်းဘာကြောင့်ပိတ်သွားခဲ့ရတာလဲ? ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော့်ခေါင်းထဲခဏခဏရောက်လာတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ့😵 တစ်ညပေါ့ NFအပေါ်ဆွဲလိုက်အောက်ဆွဲလိုက်လုပ်နေတဲ့အချိန် အမတစ်ယောက်ကGPတစ်ခုမှာမေးထားတာပေါ့ဗျာ..(GP Name တော့မမှတ်မိတော့) “ရန်ကုန်ကစားကွင်းဘာကြောင့်ပိတ်သွားခဲ့လဲဆိုတာသိရင်ဖြေပေးကြပါလားဟင် သိချင်လို့ပါရှင့်” ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုကိစ္စတွေစပ်စုရတာကြိုက်တော့ Mentတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ဖတ်ကြည့်ပါလေရော အမျိုးမျိုးတွေ့ရပါလေရဲ့ လေလံဆွဲဖို့ပိတ်လိုက်တာ…. ကစားကွင်းကိုဖျက်ပြီးလူနေအိမ် တိုက်ခန်း အဆောက်အအုံတွေဆောက်ဖို့ တစ်ခြားသောအကြောင်းတွေပါစုံစိနေလေရော🥲 အဲ့မှာကောင်လေးတစ်ယောက်မန့်ထားတာကကြတော့ မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ တော်တော်လေးဆိုးရွားခဲ့တယ် လူThay အလောင်းတွေတောင်မနည်းဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာတဲ့ […]
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့မှ ရေလုပ်သားများ ပင်လယ်ပြင်ကနေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် အလွန်ရှားပါးသော ဧရာမ ငါးတောက်တူ ငါးကြီး
March 30, 2022 Bo Bo 0
ပြည်ပဈေးကွက်တွင်မျက်နှာပန်းလှသည့်ငါးတစ်မျိုးမှာ ကျောက်ငါး (grouper) သည်လည်း ပါဝင်ပါသည်။“ငါးဝက်မ”မျိုးစိတ်ဝင် ကျောက်ငါးကို ရခိုင်တွင်‘ငါးတောက်တူ’ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ကျောက်ငါးသည် မွေးမြူရေး ငါးဖြစ်လည်း နာမည်ကြီးပြီးအရသာလည်းထူးခြားကောင်းမွန်လှပါသည်။ ကျောက်ငါးများမှာ အရေခွံထူသလို၎င်း၏အကြေးခွံ ရောင်စုံအကွက်များမှာ လှပကြပါသည်။ ကျောက်ငါးများမှာ ကျောက်ဆောင်၊ ကျွန်းစုငယ်နှင့် သန္တာကျောက်များကြား အစာရှာဖွေခိုအောင်း နေထိုင်တတ်သောကြောင့် တချို့မှာ ဝါးထောက်ချောက်ချပြီး […]
ကျန်းမာနေပေးပါ ကျန်းမာနေပေးဖို့ တစ်ခုပါပဲအမေ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာရေးတင်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
March 30, 2022 Min Thuta 0
ကျန်းမာနေပေးပါ ကျန်းမာနေပေးဖို့ တစ်ခုပါပဲအမေ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာရေးတင်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ညနေပိုင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အမေစုကို အိ ပ်မက်မက်တယ်။ တောင်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာ အမေနဲ့တွေ့တယ်။ အ မေဘေးမှာ ကလေးလေးတွေပါတယ်။ အင်္ကျီ အဖြူနဲ့ပန်းရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေပါတဲ့ ဝ မ်းဆက်လေး ဝတ်ထားတယ်။ မျက်နှာလေးက ပြုံးချိုပြီး ရွှင်ပျနေတာပဲ။ […]
Facebook ပေါ်မှာမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်… ဒီနေ့ခေတ်မှာ Facebook က လူကြိုက်အများဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး၊တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ Facebook အသုံးပြုသူဟာ တစ်ရက်ကို ၁.၂၈ ဘီလီယံခန့်ရှိတယ် လို့ မတ် လ စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook အသုံးပြုသူ လူဦးရေဟာ တစ်နှစ်ကို […]
ကားအမည်ပြောင်း ဘယ်လိုလျှောက်မလဲ… မသိသေးသူအများ အတွက်ပါ
သိပြီးသောသူများ အတွက်မဟုတ်ပါ။ စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဟု သိချင်နေသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသည့်ကိစ္စ မဟုတ်သော်လည်း procedure ကို မသိပါက ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသော ကညနရုံးတွင် ၂ ခါပြန် တန်းစီရလျှင်ပင် အတော်ပင်ပန်းပြီး စိတ်ပျက်ရပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် လုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ကညနတွင် ခရိုင်ဦးစီးမှူးနှင့်တွေ့ရန် အချိန်အတော်ကြာ တန်းစီခဲ့ရပြီး […]
အသတ်ခံရမယ့် နွားတစ်ကောင်ကို ကယ်တင်ပြီး မွေးစားလိုက်မိတဲ့ ပဲခူးသူ အပျိုကြီး မမ ရဲ့ထူးဆန်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် ပဲခူးမြိ့ုဈေးကြီး ၁၉လမ်း မှ”ဟင်္သာဧကရီ” အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အပျိုးကြီး မမြတ်သီရိသည်သူ့အထည်ဆိုင်ရှေ့ကနေဖြတ်ဆွဲသွားတဲ့နွားတစ်ကောင် ကိုမြင်ပြီးနွားဆွဲလာတဲ့ ကလိကျေးရွာကနွားပွဲစား ကိုမောင်ထွန်းကို“ဒီနွားကိုဘာလုပ်မှာလဲ”ဟု အမှတ်မထင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်…သူမနှင့်နွားပွဲစားတို့စကားပြောနေစဉ်နွားကြီးကမျက်ရည်တွေစီးကျပြီးသူမကိုကြည့်နေတာကြောင့်သနားပြီးဒီနွားကြီးကိုပေါက်ဈေးထက်၃ဆခန့်(၃၄သိန်း) ပေးပြီးဝယ်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ အခုဆိုသူကယ်တင်ထားတဲ့နွားကြီးကိုရေမိုးချိုးအမွှေးနဲ့သာများလိမ်းကျံပြီးသူ့အထည်ဆိုင်ထဲမှာမွေးမြူထားပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ နွားကြီးကိုလာရောက်ကြည့်ရှူသူများဖြင့်အထူးစည်ကား နေပါတယ်။ နွားကြီးကိုဝယ်ပြီးနာရီးပိုင်းအတွင်းမှာပဲ […]